माइत जान्छु भनेर ईण्डियामा भागेकी श्रीमती सम्पर्कमा, श्रीमती खोजीदिन श्रीमान रूँदै…..(भिडियो) – Classic Khabar
April 23, 2021 355
प्युठानकि रिता खत्री र गुल्मीका रामु खत्री बीच प्रेम बिबाह भयो। प्रेम बिबाह पछि उनको पहिलो सन्तानको रूपमा छोरा र दोस्रो सन्तानको रुपमा छोरीको जन्म भयो । त्यस पछि एक बर्ष देखि कामको सिलसिलामा श्रीमान श्रीमती सहित सबै परिवार भारतमा काम गर्न थाले । काम गर्दै गर्दा एकाएक रिताले श्रीमानको आखा छली भारत का पर पुरुस संग कुरा गर्न थालिन, यो कुरा भने श्रीमान लाई थाहा भएन ।
अहिले भने नीतु राजु लाई छोडेर भारत का एक मुस्लिम केटा संग भागेको खबर राजुले पाएपछि । श्रीमतीको खोजीको लागि राजु भारत बाट नेपालमा मिडियाको सहयोग लिन आईपुगेका थिए । उनका अनुसार हामी श्रीमान श्रीमतीनै भारतमा काम गर्थयौ । हामीहरु नजिक नजिक काम गरे पनि छुट्टाछुटै काम गर्दथ्यौ । म मेरो काममा जान्थे, श्रीमती पनि आफ्नो काममा जादा त्यो केटा संग बाटोमा धेरै बेर भेट भएर जाने क्रममा उनको प्रेम बसेछ भनेका थिए।
म संग काममा गए भनेर जान्थी तर उ भने दिन भरी केटा संग बसेर राति आउने रहेछ । मलाई यो कुरा थाहा नै भएन, हाम्रो सबै परिवार नै भारत छौ । उ पनि त्यहि ठाउ मा छ, तर कहा छ भन्ने मलाई नै थाहा छैन , मलाई ह्याटसबमा आएर धेरै धम्कि दिने गर्छे । आफ्नो बुबा संग श्रीमती नेपाल जान्छु भनेर आएकी अहिले बुबालाई छोडी उ बीच बाटोबाट भागी । श्रीमतीको बानि थाहा पाएर पनि धेरै सम्झाउदा दाई भनेकी थिइ भनेका थिए । बाकी कुराकानी हेर्नुहोस भिडियोमा:
Nextकिशोर र लक्ष्मी प्रकारणको खेलाडी को ? लक्ष्मीलाई झुट बोल्न लाउने दुलही बनाएर रुन लाउने को हो ? भयो पर्दाफास (हेर्नुहोस भिडियो )